Mgbe ejikọtara ha, ọnụ ọgụgụ ndị a na ihe ndị mere eme na-ese onyinyo ọnọdụ mgbasa ozi TV nke na-ada ụda, na-arụ ọrụ, ma baakwa uru. Ma mgbe onye na-ajụ mmụọ adịgoro ogologo oge maka ịbụ oké ọnụ - nkwupụta nke tolitere dị ka nhọrọ dijitalụ dị ọnụ ala batara na foto-anyị ahụla ezigbo mbịaghachi nke mmasị na TV gafee ọtụtụ ụdị ndị mgbasa ozi. Yabụ mgbe ọkọlọtọ na mgbasa ozi ngosi nwere ike ịdị ọnụ ala karịa iji mepụta ma bipụta na mbido, nkezi ịpị-ụdị nke ụdịrị mgbasa ozi gafere usoro niile na nkwụnye ego ka dị obere pasent 0.06. Ọzọkwa, 54% nke ndị ọrụ anaghị pịa mgbasa ozi ọkọlọtọ n'ihi na ha atụkwasịghị ha obi, ụmụ afọ 18 ruo 34 yikarịrị ka ha ga-eleghara mgbasa ozi n'ịntanetị anya, dị ka ọkọlọtọ na ndị nọ na mgbasa ozi mmekọrịta na igwe na-achọ ihe, atụnyere TV, redio, na akwụkwọ akụkọ ọdịnala.
Ugbu a, ọ bụ ezie na mgbasa ozi TV na-arụ nnukwu ọrụ nke ijide onwe ya, nke ahụ apụtaghị na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma na ndị ọzọ, usoro "hip" na usoro mgbasa ozi ọgbara ọhụrụ na ịchọrọ n'ezie mkpọsa ọhaneze zuru oke dị irè n'ofe nyiwe niile. Yabụ ebe ọ ka bụ ọkpụkpọ maka ụlọ ọrụ gafee ọtụtụ ngalaba azụmaahịa dị iche iche, TV na-agbakọ nke ọma ma bulie mbọ mgbasa ozi maka ọwa ndị ọzọ niile dị ka vidiyo ịntanetị, mgbasa ozi mmemme, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mkpanaka, wdg.
Enweghị agọnahụ na TV ka bụ mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị mma n'ebe ahụ mana ị ka kwesịrị iwebata mkpọsa n'ofe nyiwe ndị ọzọ (weebụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ekwentị mkpanaaka, wdg) - yabụ n'ihi na ọ bụghị mgbe niile ka nzaghachi na-esite na TV ọzọ - mana site na na-eji ihe siri ike nchịkọta ị nwere ike ịchọpụta na mfe mmetụta halo na telivishọn nwere na dum mkpọsa. Yabụ ka ngwaọrụ na-abawanye na gburugburu ebe obibi mgbasa ozi na-arịwanye elu, awa 36 ahụ ndị toro eto na-ekiri TV kwa izu (yana awa 22 maka ọtụtụ puku afọ), anaghị agha ụgha- ma nloghachi nke itinye ego na ndị mgbasa ozi na-aga n'ihu na-aghọrọ site na ntinye ego ha. na mgbasa ozi na ihe okike.